Igbe ọkụ, ihe nrịbama azụmaahịa na bọọdụ nbanye, ndị na-acha ọkụ ọkụ - Zhengcheng
Anyị na-agbaso ụkpụrụ nke ịkwụwa aka ọtọ na nkwado anyị, imekọ ihe ọnụ anyị ga-enweta mmeri.
Ọkachamara ụlọ ahịa n'ihu akara emeputa
Nye ọrụ n'ichepụta akara n'ihu ụlọ ahịa maka ụdị 100 karịa na Eshia.
merie site n'ịdị mma
Udidi ngwaahịa pụtara ìhè, mmepụta modular, nrụnye dị mma, mmezi dị mfe, 100% mgbochi mmiri.
Anyị ga-arụsi ọrụ ike dozie nsogbu ndị ahịa, tụlee mkpa ha n'ezie, na-enye ndị ahịa ihe kasị mma signboard ngwọta.
Anyị na-elekwasị anya na mmepụta ihe ọhụrụ, ma na-agbaso àgwà ngwaahịa mgbe niile, naanị iji nye gị ngwaahịa kachasị mma.
Ka Zhengcheng gaa ụwa, mee ka ụwa mara Zhengcheng
Sichuan Zhengcheng Starlight Energy Saving Technology Co., Ltd. e hiwere na November 2013. Ọ bụ ọkachamara emeputa nke ime ụlọ na n'èzí ịrịba ama na signboards maka yinye mma ụlọ ahịa, ụlọ ahịa, yinye pharmacies, yinye ngwa ngwa nri ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ akụ, gas ọdụ, wdg …
Vacuum Forming Light Igbe nbanye, Ihe nrịbama ụlọ ahịa ọgwụ, Ihe nrịbama ụlọ ahịa, Ihe nrịbama igbe dị n'èzí, Igbe nrịbama nke ọnya ọkụ, Akara ngosi,